Taageerihii Dhalada Ku Dhuftay Neymar Oo Kahadlay Waxa Ku Qasbay Inuu Ficilkaas Sameeyo +Sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Taageerihii Dhalada Ku Dhuftay Neymar Oo Kahadlay Waxa Ku Qasbay Inuu Ficilkaas Sameeyo +Sawirro
Taageerahii yaraa ee Valencia kaas oo dhalada madaxa kaga dhuftay Neymar Jr xilli uu dabaal dag ku sameynayay garoonka Mastella Stadium ayaa ka hadlay dareenkiisa iyo waxa walba oo ku qasbay inuu ficilkaas sameeyo.
Wiilkaan oo 17-jir ah ayaa qirtay inuu qalad weyn sameeyo isagoo cafis weydiistay Barcelona, balse wuxuu qiray in Neymar Junior uu si weyn uga careysiiyay Jamaahiirta Valencia madama uu aflagaado iyo erayo dhib badan dhagahooda gaarsiiyay.
“Waan ka jeclahay Valencia wax walba oo kale” Ayuu yiri da’yarka dhibaateeyay Neymar Junior.
“Sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan dhalo ugu tuuray, waan ogahay inaan sameeyay qalad weyn. balse Neymar wuu na aflagaadeeyay wuuna ka xanaajiyay Jamaahiirta Valencia kuwaas oo ku hadaaqayay neeftii ugu dambeysay. Dhalo, inkastoo dhalada ay marneyd, waxeyna aheyd mid kaliya ku filan hal qof, balse shan ka mid ah ciyaatoyda iska dhigay iney ku dhacday. Balse arinka i dhaawacay wuxuu yahay inaan aad u jeclahay Valencia marka lala barbardhigo wax walba oo kale, waan ogahay in ficilka aan sameeyay aysan tusaale u noqoneyn Jamaahiirta cajiibka ah ee Valencia, waana wax aan noo qalmin. waxaan jeclaan lahaa inaan cafis weydiisto Barcelona iyo kooxdeyda nolosha” ayuu warbixin kusoo qoray wiilka yar.
Si kastaba subaxnimadii talaadada ayuu aabaha wiilkaan la kulmay ilaalada garoonka Mastella Stadium si uu uga qoomameeyo ficilka wiilkiisa, balse waxaa la sugi doonaa ganaaxa ay kooxda kusoo rogto taageerahaan.